I-SPAM kunye neShishini lokuThumela imiyalezo | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 7, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UAdam Omncinci
Amashishini ayithathe kancinci impembelelo yemiyalezo ebhaliweyo. Imiyalezo ebhaliweyo, engenye eyaziwa ngokuba yiSMS (Inkqubo emfutshane yoMyalezo), ibekwe emthunzini ngaphezulu kwezicelo zewebhu ezithandwayo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iifowuni eziyi-smartphone kwaye inokusebenzisa ii -apps. Yonke ifowuni ephathekayo ivumela imiyalezo ebhaliweyo.
Njengamashishini abuyela kwesi sixhobo singakholelekiyo, uninzi luyazihoya iimvume eziyimfuneko. Umzi mveliso wayefuna ukungena kabini ukuze ufumane, kodwa ukusukela oko wehla ezo mfuno kukungena okukodwa. I-SPAM inyuke kakhulu kwaye kuya kubakho iziphumo. Abasebenzisi abaninzi abahambahambayo bahlawuliswa ngesicatshulwa ngasinye esifunyenweyo-bavule imboni yezomthetho.
le umbiko Iqaqambisa ingxaki enkulu kwishishini lokuthengisa imiyalezo. Ngokunyuka kwemiyalezo ebhaliweyo yogaxekile, ukusebenza kwentengiso ngeli jelo kuya kwehla kakhulu xa kungakhange kuhlolwe. Ngaphezulu kwesibini kwisithathu sabemi base-US abafumana imiyalezo ebhaliweyo, lixesha lokuba amashishini aqalise ukuqonda umyalezo wesicatshulwa onempembelelo kubathengi bawo kunye nokukhetha ababoneleli besoftware abanjengoTatango abaye bamisela umgaqo-nkqubo wokunganyamezeli umyalezo wogaxekile. UDerek Johnson, umphathi weTatango
NgoJulayi ka-2011, umboneleli wokuthengisa umyalezo uTatango wavavanya abathengi abangama-500 baseMelika ukuba bafumane amava kumava abo nge-spam. Iziphumo zophando zisetyenziselwe ukwenza oku kulandelayo kulwazi lokuthumela imiyalezo ebhaliweyo.
I-68% yabaphenduli bophando bathi bayifumene imiyalezo ebhaliweyo yogaxekile.
Abasetyhini abangaphantsi kwe-17 ngabona banamathuba okufumana umyalezo obhaliweyo ngogaxekile nge-86% yabaphenduli besaveyi besithi ndifumana umyalezo obhaliweyo owugqibeleleyo.
Abasetyhini abangama-55 + ngabona banamathuba okufumana umyalezo obhaliweyo ngogaxekile nge-51% yabaphenduli bophando besithi bafumene umyalezo obhaliweyo ongafunwayo.
Amadoda nabafazi ngokulinganayo kunokwenzeka ukuba babe ngabamkeli imiyalezo ebhaliweyo.
Ukuthengiswa kwemiyalezo ebhaliweyo nguTatango.
Ingcebiso yethu ihlala isebenzisa indlela yokungena kabini. Oko kufuna ukuba umsebenzisi abhalise kuqala kwiwebhusayithi okanye umyalezo obhaliweyo, kulandele isiqinisekiso sokuba banqwenela ukubhalisa. Xa siseta le nkonzo kubaxumi bethu kuyo Imfono yokuxhumaSikwacela ulwazi oluthile-olunjenge-zip code. Oku kusivumela ukuba sikwazi ukuthumela imiyalezo kamva ikhowudi yeziphu, kubabhalisi bethu. Oku kunciphisa inani elipheleleyo lokuthumela kunye nokunyusa amaxabiso okuphendula kuba imiyalezo ifanelekile ngokwendawo.